Daraasad Cusub Cabidda Joogtada Ah Ee Caanaha Oo Ay Ragga Ka Qaadaan ‘Cudur Halis Ah’ – Borama News Network - Global Point Daily
Daraasad Cusub Cabidda Joogtada Ah Ee Caanaha Oo Ay Ragga Ka Qaadaan ‘Cudur Halis Ah’ – Borama News Network
Ragga sida joogtada ah u isticmaala manaafacaadka xoolaha, gaar ahaanna caanaha, ayaa marka la barbardhigo kuwa aan isticmaalin, waxay boqolkiiba 60 halis weyn ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka kansarka ku dhaca kaadi-heysta, sida lagu xusay daraasad cusub.
Daraasaddan oo lagu daabacay joornaalka Mareykanka ka soo baxa ee nafaqada ka faallooda, ayaa waxaa sameeyay baarayaal ka tirsan Jaamacadda Loma Linda, kuwaas oo daneynayay baaritaanka xiriirka ka dhaxeeya cuntada iyo kansarka kaadi-heysta.
Tan iyo sanadkii 2001, baarayaasha ayaa la socday caafimaadka rag ku sugan Mareykanka iyo Canada. Waxay daraasaddan eegeysay cuntada raggan muddo shan sano ah.
Qaar ka mid ah raggan ayaa laga helay kansarka kaadi-heysta, kaddibna daraasadda ayaa is barbar dhigtay kuwa aan isticmaalin manaafacaadka xoolaha iyo kuwa isticmaalay. Waxaa la ogaaday in ragga maalintii cabay 430 garaam oo caano ah ay boqolkiiba 25 halis ugu jireen kansarka kaadi-heysta, marka la barbardhigo kuwa cabay 20.2 garaam maalintii.
Baarayaasha ayaa sidoo kale ogaaday in qaadashada maaddada kalshiyamka ee waxyaabaha aan manaafacaadka xoolaha ahayn laha helo aysan wax saameyn ah ku yeelan khatarta kansarka kaadi-heysta.
“Waxyaabaha aan ogaannay waxay caddeymo dheeraad ah u yihiin xiriirka manaafacaadka xoolaha iyo kansarka kaadi-heysta,” ayuu yiri Gary Fraser, oo hormuud ka ahaa baaritaankan.
Hoormoonnada caanaha xoolaha iyo kansarka kaadi-heysta
Fraser ayaa sheegay in hal sabab oo caanaha xoolaha iyo kansarka kaadi-heysta isku xiri karta ay tahay in xanuunku yahay mid ka falceliya hoormoonka. Maaddaama ilaa 75 boqolkiiba lo’da caanaha laga helo ay uur leedahay, hoormoonnada ku jir acaanaha ayaa laga yaabaa inay kordhiyaan halista kansarka kaadi-heysta.
Daraasadda ayaa sidoo kale ogaatay in daraasado hore oo la sameeyay ay isla xiriiriyeen cabidda caanaha iyo manaafacaadka kale ee xoolaha iyo kororka sokorta dhiigga, taas oo loo maleynayo inay sababo noocyo kansarka ka mid ah.
Waxyaabaha lagu ogaaday daraasaddan ayaa la mid ah kuwa daraasad kale oo sanadkii 2020 la sameeyay taas oo ay baarayaashu ku sheegeen in haweenka sida joogtada ah u caba caanaha xoolaha ay halis ugu jiraan kansarka naasaha.
Cuntada dhirta ka sameysan
Taas beddelkeed, baaritaanno badan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in cuntada dhirta ka sameysan ay difaac u tahay noocyo kansarka ka mid ah, oo uu ka mid yahay kan kaadi-heysta ku dhaca.
Daraasad sanadkii hore lagu daabacay Wargeyska Urology ayaa waxaa lagula socday caafimaadka 47,243 muddo 28 sano ah.
Cuntada dhirta ka sameysan ayaa la sheegay inay yareyso halista kansarka kaadi-heysta ku dhaca.
Archbishop Gallagher: ‘War in Ukraine wake-up-call to humanity’